‘सरकार सबै प्रदेशमा ट्रमा सेन्टर स्थापनाको तयारीमा छ’ – Health Post Nepal
२०७६ असोज ३० गते १४:५४
सरकारले सबै प्रदेशमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । बिहीबार विश्व ट्रमा दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्याराज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले सबै प्रदेशमा ट्रमा सेन्टरको स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको बताएका हुन् ।
‘स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि बजेट र जनशक्ति अभाव भइरहेको छ,’ राज्यमन्त्री यादवले भने, ‘राज्यको स्वास्थ्य नीति स्पष्ट नभएका कारण पनि स्वास्थ्यसंस्थाहरू चाहेर पनि बनाउन सकिरहेका छैनौँ ।’ मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा सरकार आवश्यक स्थानहरूमा स्वास्थ्यसंस्थाहरू स्थापना गर्न लागिपरेको यादवको भनाइ छ । राज्यमन्त्री यादवले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरलाई विश्वस्तरीय सेवा–सुविधायुक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमबहादुर विष्टले उपत्यकामा सवारी दुर्घटनाको पछिल्लो अवस्था र कारणको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै ट्रमाको आवश्यकताबारे धारणा राखेका थिए । उनका अनुसार उपत्यकामा भएका सवारी दुर्घटनामा महिला २४ प्रतिशत र पुरुष ७६ प्रतिशत घाइते भएका छन् ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्यसचिव खगराज बरालले समेत ट्रमा सेन्टरको आवश्यकताबारे धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमबहादुर विष्टले उपत्यकामा सवारी दुर्घटनाको पछिल्लो अवस्था र कारणको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै ट्रमाको आवश्यकताबारे धारणा राखेका थिए । उनका अनुसार उपत्यकामा भएका सवारी दुर्घटनामा महिला २४ प्रतिशत र पुरुष ७६ प्रतिशत घाइते भएका छन् ।
कार्यक्रममा मुलुकको एक मात्र ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा. प्रमोद यादवले ट्रमाका केसबाट बच्न सकिने भएकाले दुर्घटना हुनै नदिनका लागि व्यापकस्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘ट्रमाबाट हुने मृत्यु अधिकतर अवस्थामा हामी आफैँले निम्त्याइरहेका छौँ,’ डा. यादवले भने, ‘अधिकांश दुर्घटना हाम्रै असावधानीका कारण भइरहेका छन् । दुर्घटनापछि पनि समयमा उपचार सेन्टरमा नपुर्याएर घरमै राख्ने गर्दा समस्या जटिल बन्न गई अकालमै मृत्यु भइरहेको छ । त्यसैले यसको न्यूनीकरणका लागि जनचेतना आवश्यक छ ।’ मानिसले नबुझेका कारण ट्रमाका केसबाट अकालमै मृत्यु भइरहेको र यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
मुलुकको एक मात्र ट्रमा सेन्टरको विकासका लागि यन्त्र–उपकरण र जनशक्ति अभाव भएकाले त्यसमा सरकारले आवश्यक मात्रामा सहयोग गर्नुपर्ने डा. यादवले बताए । ‘हामीलाई एमआरआई मेसिनको अति आवश्यकता छ,’ डा. यादवले हेल्थपोस्टसितको कुराकानीमा भने, ‘त्यस्तै, आइसियूलाई न्यूनतम ५० बेडसम्ममा विस्तार गर्नुपर्नेछ र जनशक्ति पनि ठूलो संख्यामा थप गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ हाल ट्रमा सेन्टरमा ११ बेडको आइसियू रहेकोमा १० बेड मात्र सञ्चालनमा छन् ।
बिहीबार बिहान ट्रमा सेन्टरले विश्व ट्रमा दिवसका अवसरमा प्रभातफेरीको आयोजना गरी दुर्घटनाबाट बच्न तथा भवितव्य आइहालेमा यथाशीघ्र उपचारका लागि अस्पताल पुर्याउन जनचेतनामूलक सन्देश प्रवाह गरेको थियो । बिहान ट्रमाबाट सुरु भएको प्रभातफेरी रत्नपार्क हुँदै टुँडिखेल परिक्रमा गरी पुनः सेन्टरमै पुगेर टुंगिएको थियो ।
ट्रमा सेन्टरले पहिलेदेखि नै जनशक्तिको अभाव झेल्दै आएको छ । सेन्टरमा सबैभन्दा बढी नर्सिङ जनशक्तिको अभाव रहेको निर्देशक डा. यादव बताउँछन् । त्यस्तै, चिकित्सक तथा अन्य प्राविधिक जनशक्ति पनि थप्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले सातै प्रदेशमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने विषयमा धारणा रहेका छन् । राजधानीबाट तराई हुँदै देशका पूर्वीदेखि पश्चिमी भूभाग पुग्ने प्रमुख राजमार्गको लामो भाग पर्ने धादिङ जिल्लामा बढी दुर्घटना हुने भएकाले त्यहाँ ट्रमाको स्याटेलाइट क्लिनिक खोल्नुपर्ने धारणा कार्यक्रममा राखिएको छ । यसो गर्न सकेमा दुर्घटनामा परेका बिरामीलाई तत्कालको प्राथमिक उपचार त्यहीँ गरेर अस्पतालमा पठाउन सकेको खण्डमा बिरामीको ज्यान जोगाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
यसअघि बिहीबार बिहान ट्रमा सेन्टरले विश्व ट्रमा दिवसका अवसरमा प्रभातफेरीको आयोजना गरी दुर्घटनाबाट बच्न तथा भवितव्य आइहालेमा यथाशीघ्र उपचारका लागि अस्पताल पुर्याउन जनचेतनामूलक सन्देश प्रवाह गरेको थियो । बिहान ट्रमाबाट सुरु भएको प्रभातफेरी रत्नपार्क हुँदै टुँडिखेल परिक्रमा गरी पुनः सेन्टरमै पुगेर टुंगिएको थियो । त्यसपछि सेन्टरले ९ देखि ११ बजेसम्म औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । हरेक वर्ष १७ अक्टोबरका दिन विश्व ट्रमा दिवस मनाउँदै आइएको छ ।